Fonosana latabatra spandex Sina ho an'ny mpanamboatra fampakaram-bady na fanasana amin'ny mpanamboatra | Jianye
Latabatra misy labiera sy fitsangantsanganana
Latabatra azo ovaina ambony
latabatra mafy / latabatra mahitsizoro
rakotra latabatra spandex amin'ny fampiasana fampakaram-bady na fanasana
Azo alefa, tsy mahazaka solika
Trano, ivelany, hotely, mariazy, fanasana
fonony latabatra spandex
fotsy, mainty, manga ary mena
fiaraha-misakafo sy latabatra mamoritra
50000 Unit / Units isam-bolana
pc iray ao anaty kitapo pe iray ary 50 pcs anaty baoritra ivelany ho an'ny fonony spandex
Modely No. Hy-TC
Material Lamba spandex kalitao, lycra 10% + polyester 90%, lamba 4 no velarana
Lamba GSM 200g / m2 eo ho eo
Color fotsy, mainty ary mena (azontsika atao ny manao loko misy amin'ny tabilao loko na loko efa namboarina)
Ny haben'ny latabatra 183 * 76 * 74cm & 244 * 76 * 74cm, ny refin'ny habeny efa-joro
Ataovy miavaka Eny
OEM Ekena Eny
Fampiasana Fanasana, mariazy, trano na trano fisakafoanana
tombony Mora mitafy / miala, maharitra, miloko tsara tarehy, mahomby indrindra amin'ny vidiny, tsy misy ketrona, mahatsapa tanana malefaka, mahatohitra
Santionany vidiny santionany maimaim-poana sy santionana ny entana amin'ny alàlan'ny karaman'ny mpanjifa
Fotoana fitarihana ohatra tokony ho 5 andro
Fotoana famokarana manodidina ny 10 andro
Payment 30% TT mialoha ary 70% TT alohan'ny fandefasana entana, 100% TT eo imasony
Introductions Afaka manao ny habeny marina isika, satria manana haben'ny latabatra fatratra
pc iray ao anaty kitapo pe iray ary 50 pcs amin'ny baoritra ivelany
1. manolora santionany maimaim-poana hanamafisana
2.Araka ny takian'ny mpanjifa hamolavola sy hamokarana
3. manolotra antontan-taratasy fanafarana sy fanondranana
4. Serivisy fanaraha-maso aorian'ny fivarotana
Shaoxing Jiangye ivelany vokatra co., Ltd dia mpanamboatra matihanina amin'ny karazana vokatra fanaka plastika rehetra. Any amin'ny Shangyu Yonghe Industrial Zone, faritra atsinanan'ny Faritanin'i Zhejiang, Sina izy io. 50km miala an'i Ningbo Port fotsiny ny toerana, ary 200km avy any Port Shanghai, toerana ahazoana fifandraisana mora foana. Ny orinasa dia efa nahazo fitaovana teknolojia avo lenta, toy ny mpanera flan solosaina milina famaohana plastika 500g ka hatramin'ny 15000g, milina manodinkodina sy ny milina fanodinana. Ny vokatra lehibe any Hongye dia ny latabatra, seza ary dabilio ho an'ny trano sy ivelany, izay raisin'ireo mpanjifa rehetra manerantany.
Ny kalitao, ny fanavaozana ary ny lazany no fototry ny orinasa natsangana. Ny vokatra rehetra ao Hongye dia azo raisina ho endrika avo lenta sy kanto. Ny sary na santionan'ny vokatra miara-mamorona avy amin'ny firenena manerantany dia raisina an-tanan-droa. Andao hiaraka isika, hahatonga ny ho avy ho tsara sy mamiratra.
1.Inona no tombony HDPE fitaovana manta raha oharina amin'ny fitaovana hafa, toy ny PP, ABS?
Izy io dia mahatonga ny latabatra ho matanjaka kokoa, maivana ary mateza kokoa ary maivana kokoa, mora diovina, mora entina, amboarina hatsangana.
2.Inona ny teknolojia hamokarana vokatra?
Blow bobongolo sy volo vy mifono vovoka
3. Mandra-pahoviana ny fiantohana ny vokatra sy ny fomba anaovako fitakiana?
herintaona amin'ny fomba marina hampiasana
4.Ahoana ny MOQ
Kaontenera 1 * 40HQ dia azonao atao ny mampifangaro latabatra sy seza isan-karazany. Saingy raha latsaky ny 1 * 40 HQ, ho an'ny kaontenera 20GP, ny mpividy dia handoa vola USD250 fanampiny any an-toerana.
5.Ahoana ny logo OEM sy pirinty?
OEM izay OK, raha mahazo ny taratasy fanomezan-dàlana marika famantarana ny mpividy isika dia hanafaka sary pirinty maimaim-poana raha toa ka be dia be ny baiko
6.Inona ny fandoavam-bola ary ahoana no ahazoana ny entana avy any Shina?
30% mialoha ny fandoavam-bola ary azonao atao ny manafatra sambo na manampy anao hanafatra sambo izahay.Rehefa vita ny entana dia hampiditra kaontenera izahay .Ny mpandefa entana dia manome anay B / L dia handefa kopia B / L amin'ny mailaka na fax izahay, tokony tokony mandoa ho anay ny fandoavam-bola ary handefa anao ny B / L CO tany am-boalohany sy ny faktiora lisitry ny fonosana. azonao ampiasaina ireto antontan-taratasy ireto hahazoana ny entanao avy amin'ny fadin-tseranana eo an-toerana
7.Aiza ny tsenantsika lehibe?
Eoropa, Afrika atsimo sns
Previous: Latabatra fisorohana plastika marobe ampiasaina amin'ny fanasana
mamorona ny tsara indrindra amin'ny fanaka sy fanaka anatiny izahay ho an'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana ary fivarotana eran-tany.
Mpamatsy fanaka trano fandraisam-bahiny matihanina izahay, manome fanaka manara-penitra ho an'ny hotely sy trano fisakafoanana ao anatin'izany ny fanaka an-trano fandraisam-bahiny.
Manokana amin'ny famokarana kalitaon'ny Hotely fampiasa amin'ny trano fandraisam-bahiny izahay.
Amin'ny maha mpanamboatra fanaka trano fandraisam-bahiny anay dia azontsika atao ny manamboatra ny fomba rehetra hamaliana ny fepetra voafaritra amin'ny marika hotely lehibe rehetra.
Manome famolavolana fanaka trano fandraisam-bahiny tsy manam-potoana izahay, manomboka amin'ny fomba nentim-paharazana ka hatramin'izao, amin'ny fampiasana fitaovana faran'izay tsara sy teknika fananganana. Azontsika atao ny manamboatra ny fanaka amin'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny fangatahanao.
Manamboatra fanaka fandraisam-bahiny sy fanaka fandraisam-bahiny manokana izahay mba hampidirana ireo takelaka hotely, hotely Nightstands, hotely Credenzas, hotely Micro Fridge Dressers, fitaratra hotely, latabatra fandraisam-bahiny, seza hotely ary latabatra momba ny hotely.
Ny habe dia azo amboarina.
Ny loko dia azo namboarina. (Mazava, fotsy, mainty, mavokely, kafe, volamena, sns)
Ny endrika dia azo namboarina.
Drafitra pirinty & lamina voasokitra azo namboarina.
Ny habetsaky ny vatasarihana dia azo namboarina.
24 ora amin'ny serivisy an-tserasera
Valiny haingana ao anatin'ny 12 ora
Vokatra misy mari-pahaizana iraisam-pirenena
Vokatra 100% fanamarinana QC alohan'ny fandefasana
Warranty dimy taona
OEM, ODM serivisy tongasoa
Manantena mafy izahay ny hametraka fifandraisana maharitra miaraka aminao, tongasoa ny fanontanina sy ny fitsidihan'ny orinasa. Misaotra anao!
Mandondona fonosana, ny ampahany tsirairay dia feno PE Foam, ao anatiny ho fiarovana, ivelany misy boaty baoritra matanjaka 5 sosona, boaty Carton pirinty miaraka amin'ny Logo an'ny mpanjifa sy ny famaritana, ao anaty boky torolàlana mora azo amboarina; Amin'ny ampahany Glass dia fonosina ala hazo mba hisorohana ny marefo.
Izahay dia mamolavola sy manamboatra sanda ho an'ny vokatra vola miaraka amin'ny antoka maharitra herintaona amin'ireo ambaratonga miavaka rehetra aseho amin'ity bokikely ity.
Manolotra fonosana serivisy iray feno izahay manarona ny fanadihadiana momba ny tranokala, ny saripika ara-teknika an'ny CAD, ary ny fanolorana ny teny nalaina. Ny fanamafisana dia apetraka amin'ny fiantohana kalitao notohanan'ny serivisy serivisy aorian'ny varotra.
Serivisy famolavolana matihanina feno.
Torolàlana momba ny fanadihadiana sy ny fametrahana.
Mampiasa fitaovana sy singa avo lenta.
Ekipa miasa efa za-draharaha.
Ny fifanarahana fikolokoloana mba hiantohana ny fanananao sarobidy dia mijanona ao anaty filaminana mandrindra.
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina antsika dia tsy vitan'ny mamokatra fotsiny fa manamboatra, manome ary manana ny serivisy aorian'ny varotra ho an'ny mpanjifa. Raha mila serivisy fametrahana azy ny mpanjifa dia afaka mandefa ny teknisianinay koa izahay hanara-maso ny fametrahana azy. Ho fanampin'izany, izahay koa dia afaka manome famolavolana maimaimpoana ho an'ny mpanjifa tsirairay ary hamaly izahay ao anatin'ny 12 ora raha manana fanontaniana ny mpanjifa.
manitatra fonony seza mora vidy
Saron'ny latabatra spandex avo lenta ho an'ny seza
Fonoson'ny latabatra 2018 momba ny fanasana amin'ny fampakaram-bady
Latabatra fivarotana mafana sy fonenana seza fiarovana
amidy mafana mora azo seza portable fonony elastika cha ...
fivarotana mafana inflatable seza spandex fampakaram-bady sy ...
CONSULTATION MAIMAIMPOANA 0086-18042502196
ADDRESS Vohitra Qingfeng, Faritra Indostrialy Yonghe, Shangyu City, Provice Zhejiang, Sina